Doorasho madaxweyne oo la baajiyey ka dib markii la waayey musharaxiin u tartanta – SBC
Doorasho madaxweyne oo la baajiyey ka dib markii la waayey musharaxiin u tartanta
Posted by editor on November 17, 2011 Comments
Doorasho loogu tartamayey jagada madaxweynaha Jamhuuriyada Moldova ee horey uga mid aheyd Jamhuuriyadii burburtey ee midowga Soofiyeeti una dhaxeysa wadamada Romania & Galbeedka Ukraine ayaa laga tanaasulay oo la baajiyey ka dib markii la waayey musharax u tartama.
Doorashadan oo lagu wadey inay dhacdo maalinimada beri oo bisha November tahay 18 ayaa waxaa laga doonayey xubnaha baarlamanka dalkaasi oo tiradoodu tahay 101 xubnood inay 61 ka mid ah isku raacaan dadka jagada madaxweynaha u tartamaya, balse waxaa la waayey codkaasi aqlabiyada ah, iyadoo xisbiyada wadankaasi ee xubnaha baarlamanka ku leh ay ku guuldareysteen inay isku raaceen arinkaasi.
Madaxweynaha wadanka Moldova waxaa soo doorta baarlamanka waana taasi mida keentey in la waayo musharaxiin ama musharax la isku raacsan yahay oo ay xubnaha baarlamanku soo xulaan.
Baarlamanka Moldova waxaa ugu xoogan labada xisbi ah ee kala ah xisbiga Shuuciga iyo kan kale ee Isbahaysiga isdhexgalka Yurub.
Hadii ay dhacdo in doorashada xigta baarlamanku isku raaci waayo xulida musharaxa madaxweynaha waxay noqon doontaa in baarlamanka wadanka la kala diro taasi oo horey u dhacdey sanadihii 2009-kii & 2010.
Qulqulatooyinka dhanka siyaasada ee Moldova ayaa cirka isku shareeray April 2009 ka gadaal markii dadka wadankaasi ay ka caroodeen oo ay ka banaanbaxeen natiijo aan lagu murmin oo xisbiga Shuuciga uu ka helay doorashooyinkii dhacay.
Laakiin caradii iyo banaanbixii dadweynaha ayaa keentay in dib loo tiriyo codadka doorashada waxaana halkaasi ka soo baxay in 60 cod uu helay xisbigaasi iyadoo uu ka dhimanaa hal cod oo kaliya waxaana halkaasi kursi ama cod ku heli lahaa inay ku soo doortaan madaxweyne ka yimaada xisbigooda.
Hadal hayeenka baarlamanka Moldova Marian Lupu oo ka soo jeedo Isbahaysiga Isdhexgalka Yurub ayaa ku nuuxnuuxsadey in xisbagoodu aanay dooran doonin musharax, isla markaana aanay dooneyn inay ka qayb qaataan doorasho aan lagu guuleysan karin natiijadeeda.
Sababaha ugu tunka in xisbiga Shuucigu uu ka biyo diido soo magacaabista xubnaha musharaxiinta ayaa lagu macneeyey xisbigaasi oo ay gudhiisa ka aloosan tahay kala qaybsanaan, iyagoo cabsi ka qabey in hadii ay sidaasi ku galaan doorashada bishan November si fudud looga adkaan doono, waxaana la sheegayaa in sadex ka mid ahaa xubnaha baarlamanka ku jira ee xisbigaasi ay ka baxeen ama ka biyo diideen siyaasada xisbiga.
Arintan ayaa siin laheyd sadex cod Isbahaysiga oo iyagu qudhoodu soo magacaaban waayey musharax u tartama.